Ziziphi izilwanyana ezibandakanya kwi-ecosystem
by ULaura Klappenbach
Izilwanyana zibambisana kunye nezindlela ezininzi. Ngethamsanqa, sinokwenza iingxelo eziqhelekileyo malunga nale nxaxheba. Oku kusinceda siqonde ngakumbi indima edlalwa yintlobo kwizinto eziphilayo kunye nendlela iintlobo zendalo ezichaphazela ngayo okanye ezichaphazela kakubi iintlobo ezizungezile.
Kwiintlobo ezahlukeneyo zokusebenzisana phakathi kweentlobo, ezininzi zibandakanya izibonelelo kunye nabathengi.
Umthombo, kwizinto eziphilayo, into ethile (njengokutya, amanzi, indawo yokuhlala, ilanga, okanye inyamazane) efunwa ngumzimba ukwenza umsebenzi obalulekileyo njengokukhula okanye ukuveliswa. Umboleki ngumzimba odla i-resource (njengezilwanyana, izilwanyana, okanye izithintelo). Uninzi lwentsebenziswano phakathi kwezilwanyana lubandakanya iindidi ezikhuphisanayo kunye neentlobo ezikhuphisanayo.
Ukusebenzisana kwezintlobo kungabelana ngezigaba ezine ezisisiseko ngokubhekiselele kwindlela iintlobo ezithatha inxaxheba ezichaphazelekayo ngokuchaphazelekayo. Ziquka ukusebenzisana ngokuncintisana, ukusebenzisana kwezixhobo zabathengi, ukusebenzisana kwe-detritivore-detritus, kunye nokusebenzisana.
Ukusebenzisana ngokukhuphisana kukubandakanyeka okubandakanya iintlobo ezimbini okanye ngaphezulu ezikhuphisanayo ezifanayo. Kule ntshukumo, zombini iintlobo ezichaphazelekayo zichaphazelekayo. Ukusebenzisana ngokukhuphisana kumaxesha amaninzi angacacanga, njengokuba zimbini iintlobo zombini zidla izixhobo ezifanayo kodwa zingabandakanyeli ngqo.
Kunoko, zichaphazela omnye nomnye ngokunciphisa ukufumaneka kwezibonelelo. Umzekelo wale ndlela yokusebenzisana ibonakala phakathi kweengonyama kunye neengwenya. Ekubeni iintlobo zombini zondla ixhoba elifanayo, zithintela kakubi ngokunciphisa inani lexhoba. Esinye isityalo sinokuba nengxaki yokuzingela kwindawo apho enye ikhona.
Ukusebenzisana kwezibonelelo zabathengi
Ukusebenzisana kwezibonelelo zabathengi kukubandakanya abantu abathile bezilwanyana ezilwanyana zidla abantu bezinye iintlobo. Imizekelo yokusebenzisana kwezixhobo zabathengi ibandakanya ukusebenzisana kwezidlova kunye nokusebenzisana kwezityalo. Ukusebenzisana kwezibonelelo zabathengi kuthintela iintlobo ezibandakanyekayo ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokuqhelekileyo, olu hlobo lokusebenzisana lunempembelelo entle kwiintlobo zabathengi kunye nempembelelo embi kwiintlobo zendalo. Umzekelo wobambiswano lwabathengi-mboleko luya kuba yingonyama idla i-zebra, okanye idibra isondla ngotshani. Kwimzekelo yokuqala, i-zebra ngumthombo, ngelixa umzekelo wesibini ungumthengi.
Intsebenziswano ye-Detritivore-detritus ibandakanya iintlobo ezidla i-detritus (efile okanye edibanisa umcimbi wendalo) wezinye iintlobo. Intsebenziswano yokutshatyalaliswa kwe-detritivore-detritus yintsebenziswano enobungakanani kwintlobo zabathengi. Ayinayo impembelelo kwiintlobo zendalo ngenxa yokuba sele ifile. I-Detritivores ziquka izidalwa ezincinci ezifana ne- millipedes , i-slugs, i-woodlice kunye namakhukhamba olwandle. Ngokucoca ukubola kwezinto zezityalo kunye nezilwanyana, zidlala indima ebalulekileyo ekugcineni impilo yezinto eziphilayo.
Intsebenziswano ye-Mutualism yintsebenziswano apho iintlobo zombini - umthombo kunye nomthengi-bayazuza kwi-intsebenziswano. Umzekelo wolu lubudlelwane phakathi kwezityalo kunye ne-pollinators. Phantse iikota ezintathu zeentyantyambo zezimbali zixhomekeke kwizilwanyana ukuze zibancede ziphole. Ukutshintshiselwa kule nkonzo, izilwanyana ezifana neenyosi kunye neendlumbane zivuzwa ngokutya ngendlela yempova okanye i-nectar. Ukusebenzisana kunenzuzo kuzo zombini iintlobo, izityalo kunye nezilwanyana.
Ii-Dinosaurs ezili-10 ezibalulekileyo ze-Afrika
Uphi i-Dinosaurs Live?
Ngaba amaDinosaurs aseMadeni ayehluke njani kwiDinosaurs yabasetyhini?
I-Apatosaurus, i-Dinosaur Kanye eyaziwayo njengeBrontosaurus
Funda malunga nama-Tigers angama-10 asandul 'ukuphela
I-Randolph-Macon College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-AP yeKemistry Course and Subject Topics
Yintoni Ixinzelelo YaseTire Okufuneka Isetyenziswe KwiiTyhuthuthu Zeentaba?
Ukuzonwabisa ngeBhayibhile: NgeNombolo
Nguwuphi u-Centripetal Force?
Iinkolelo zeCalvary Chapel kunye neZenzo
I-CRUZ Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
Indlela iSebenza ngayo iGesi yeGarin
I-Michigan State University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IiNkcukacha zeNtsholongwane yeeNqwelo
Ngaba Utshisa Amakholori Angaphezulu Xa Ucinga Ngenzima?
Spinosaurus vs Sarcosuchus - Ubani Owuthathayo?
Taiwan | Iinkcukacha kunye neMbali
Iqela lePunt lokubuyisa lifuna ukunyusa?
Iprofayile yeentlobo: i-Alligator Gar
Ukuloba kweSiqithi saseGuadalupe
Iimpawu zoPhulo lokuThengisa iPhulo lakho eliPhambili eliPhambili